Gbasara Anyị | Yuyao Sanxing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.
Linear eme ihe
TV ebuli & Isiokwu inwego
Yuyao Sanxing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.bụ ụlọ ọrụ nkwonkwo ngwaahịa na-ejikọ mmepụta, nyocha na mmepe nke ngwaahịa electromechanical. The ụlọ ọrụ tumadi specializes na nnyocha, mmepe na n'ichepụta nke linear actuators, akara igbe, telivishọn na-apụ na ọdịda usoro, ngwá ụlọ na-eweli usoro na ndị ọzọ na ngwaahịa, na nke nta nke nta na-etolite pụrụ iche, nnukwu-ọnụ ọgụgụ mmepụta.
Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji electric sofas, ịhịa aka n'ahụ oche, eze oche, eze ọgwụ akwa, traction akwa, telivishọn ije counters, ngwá ụlọ na ndị ọzọ mmegharị mkpa linear ngagharị mmejuputa ụlọ ọrụ nke oge. Ọ dị oke mfe ịwụnye. Ọ gafeela akwụkwọ ikike nke European CE wee soro usoro iwu EU ROHS. Ha na-ọtụtụ-eji ntụrụndụ, ngwá ụlọ, Chemicals, ọgwụ, na ndị ọzọ na ubi.
Anyị nwere otu obi ike, ọhụụ na otu. Site na teknụzụ mepụtara site na mba ofesi, akụrụngwa ama ama ama na mbọ anyị na-adịgide, ngwaahịa anyị na-enweta ezigbo mma. Nabata na ụlọ ọrụ anyị ka anyị lelee ma nye anyị aro bara uru.
Micro Linear na-arụ ọrụ, Ikuku Remote Control N'ihi Hospital, Bedlọ ọgwụ Bedlọ Ọgwụ Bedlọ, Electric Bed Ndina Remote, High Speed ​​Linear Actuator, Njikwa Remote Medical,